Madrid-yadii oo Maryo Dhiigleh Kala Furtay Isna Marri Waayay + Sawiro
HomeChampions LeagueMadrid-yadii oo Maryo Dhiigleh Kala Furtay Isna Marri Waayay + Sawiro
Goolwadaha Real Madrid ee Iker Casillas ayaa jebiyey rikoodhka safarashada horyaalka Yurub ee Champions League ciyaar maryo dhiig leh la kala furtay oo kooxdiisu marti u ahayd naadiga ay xafiiltamaan ee Atletico Madrid is araggii koobaad ee rubuc dhamaadka horyaalkaasi.
Halyeyga reer Spain ayaan qaban shaqo sidaas u badan ciyaartiisii 147 aad ee Champions League oo uu safto kulankan kooxdiisa lagu qabtay barbar dhaca 0-0 ka ah geggida Vicent Caldron.
Laakiin goolwadaha ka soo horjeeday ee Jan Oblak ayuu ahaa xidiga ciyaartu kaas oo badbaadiyey qaybtii hore kubado lala hortagey oo ay ku jirtay midii Gareth Bale kula soo baxay balse uu shabaqa ka leexiyey.
Mario Mandzukic ayuu ahaa ninka dhiiga shalaqsaday ee dagaalkii uu ku bilowday ku dhamaystay , waxaase Madrid ciyaarta dambe ka maqnaan doona oo ay adhaxda uga jabi doontaa Marcelo oo huruud qaatay ciyaarta dhexdeeda.
Labada naadi ayaa ciyaarta is aragga labaad kulmi doona 22 ka bishan April iyo garoonka Bernabeu.
Tababaraha Madrid Oo Soo Saaray Liiska Ciyaaryahanada Uu la shir iman Doono Kulanka PSG
02/11/2015 jambiir sultan
Mourinho : Waxay Ahayd In Arsenal 3 Ciyaaryahan Casaan Laga Siiyo….